Izitovu ezitshiphu, zeziphi emazithenge ngo-2022? Ubushushu ngemali encinci
Iiradiyetha zokusetyenziswa okuphantsi
I-air conditioner ephathekayo enempompo yobushushu
Izitovu zizixhobo ezisebenza ukwandisa ubushushu begumbi esilibeka kulo. Kusinceda sihlale sifudumele ngamaxesha abandayo. Kukho iintlobo ezininzi zezitovu ngokuxhomekeke kwi uhlobo lwamafutha esisetyenziselwa ukunyusa ubushushu.
Kule post siza kuhlalutya zonke iintlobo zezitovu ezikhoyo kunye neenzuzo kunye nokungalunganga kwento nganye. Ukongeza, uya kuba nako ukwazi amaxabiso kunye nokufikelela kubo bonke abo banomgangatho ophezulu kunye nexabiso elihle.
Ezona zitovu zitshiphu kakhulu zokufudumeza indlu yakho ebusika
Nalu ukhetho lwezona zitovu zokuthintela ukubanda ebusika. Ngayo nayiphi na kwezi modeli uya kuphumelela kuba zikhethwa ngabasebenzisi kwaye zezona zinexabiso eliphezulu lemali:
Orbegozo BP 5007 –... Bona amanqaku Izimvo eziyi-962 Jonga isivumelwano
Orbegozo BP 0102 - Isitovu ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-253 Jonga isivumelwano
Orbegozo BB 5000 - Isitovu ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-432 Jonga isivumelwano
ISITOVU SOMTHI OMNYAMA... Bona amanqaku Izimvo eziyi-5 Jonga isivumelwano
Isitovu sePellet 14 kW... Bona amanqaku Izimvo eziyi-3 Jonga isivumelwano
I-AVANT AV7554-Isitovu ... Bona amanqaku Izimvo eziyi-145 Jonga isivumelwano
Okona kulungileyo	Orbegozo BP 5007 –...
Umgangatho wexabiso	Orbegozo BP 0102 - Isitovu ...
Oyintandokazi yethu	Orbegozo BB 5000 - Isitovu ...
ISITOVU SOMTHI OMNYAMA...
Isitovu sePellet 14 kW...
I-AVANT AV7554-Isitovu ...
Las izitovu zepelethi Ziye zasasazeka kwiminyaka edlulileyo ngenxa yokusebenza kwazo kakuhle kunye nokusebenza kakuhle. Ukusebenza kwayo kulula kwaye akubizi mali ininzi. Isitofu sinetanki yokugcina i-fuel, kule meko, i-pellet. Xa sifaka isixhobo sisebenza, isikrufu sihambisa i-pellet kwigumbi lokutsha ukubasa umlilo ngesantya apho inkqubo yolawulo lombane ibonisa.
Iipellets ziyatsha, zikhupha ubushushu kunye nomsi othungelwa kwindawo engasemva apho kudityaniswe netshimini yangaphandle.
Ukuba ufuna ukuba nesitovu sepellet, sebenzisa uncedo lwethu.
Jonga izitovu zepellet
Enye yeenzuzo ezinikezelayo kukukwazi ukucwangcisa amaxesha apho isitofu sivuliwe ukunika ubushushu kwigumbi kwaye siphinde sicime. Ezi zitovu zibhideke kakhulu kunye nezitovu ze-biomass, ekubeni i-pellet uhlobo lwesibaso se-biomass. Ihlanganiswe nge-sawdust edibeneyo ngendlela yeesilinda ezincinci. Ngokubanzi, iikhilogram ezimbini zeepellets zibonelela ngobushushu obufanayo nelinye ilitha yedizili.
Zezona zitovu zinexabiso eliphantsi ezikhoyo namhlanje. Amafutha ayo yibiomass efumaneka emahlathini. Zisekelwe kwizitovu zenkuni zemveli zobomi bonke, kodwa zisebenza eyona teknoloji iphambili. Oku kwenza ukusetyenziswa kwayo kukhululeke ngakumbi kwaye ukutshisa kuphuculwe.
Ekubeni amafutha awo endalo nendalo ngokupheleleyo, awayongozi kangako kwindalo esingqongileyo. Bafanelekile ukuba basebenzise ubushushu bendalo kunye nobushushu obucocekileyo.
Las Izitovu zeenkuni zezona zemveli. Ezi zixhobo ezisebenzisa iinkuni njengezibaso. Iinkuni zifunyanwa emithini. Ukusetyenziswa kwayo yonke imihla ekhitshini kwiindawo zasemaphandleni, nangona iphinda isebenze ukunika ubushushu kunye nokunyusa izinga lokushisa kwegumbi.
Ngokuqhelekileyo, zonke izitovu zokhuni zinemibhobho ephela kwitshimini ekhupha iigesi eziveliswa kukutsha kwaye inceda ukunciphisa umngcipheko wokuphefumla umoya ongcolileyo.
Zezona zitovu zilula ukuzisebenzisa kwaye zibonelela ngokuphumla ngakumbi ngenxa yendawo eyongezelelweyo yekhaya elinikezelwa yidangatye. Kungathatha ukuya kwiiyure ezine ukuba ilangatye litshise, kodwa inokugcina ubushushu kakuhle ukuya kutsho kwiiyure ezingama-20. Isitovu seenkuni esivutha malunga neeyure ezili-9 sinika ubushushu obaneleyo ubusuku bonke.
Unomdla wokuthenga isitovu seenkuni? Apha uya kuzifumana ngexabiso eliphantsi.
Bona iinkuni ezitshisa izitovu
Iinkuni ezisetyenziswayo kufuneka zibe neqondo elincinci lokufuma ukuba ufuna ukuba zihlale zivutha ixesha elide. Ukomisa iinkuni, kokukhona kutsha ngokukhawuleza.
Kukwakho nezitovu zeenkuni ezineoveni ukuthatha ithuba lobushushu obuveliswayo kunye nokupheka ukutya okufana nesonka, iipizza, ezinye izikeyi kunye neerosti.
Uyilo lwe Izitovu zegesi zivumela ukusebenza kakuhle. Amafutha asetyenziswe kwesi sihlandlo yigesi yebutane. Bathanda ukusebenza ngokugqwesileyo. Ngaphambili, abantu babesoyika ukuthenga nokusebenzisa igesi yendalo okanye iisilinda zegesi zebutane.
Nangona kunjalo, okwangoku, ezi ntlobo zezitovu zikhuselekile kakhulu. Ukongeza, bayakwazi ukwenza ukonga okongeziweyo ngenyanga kwaye sinokuyisebenzisa nangaliphi na ixesha likaxakeka.
Izitovu zerhasi zibalasele ngokuba nexabiso eliphantsi kakhulu. Ukuba ufuna ukuthatha ithuba lawona maxabiso angcono, ungaphoswa sikunikeza.
Jonga izitovu zerhasi
Ukusebenza kwayo kulula kakhulu. Inesakhelo apho i-cylinder ye-butane yegesi ibekwe kwaye i-burner ijongene nokugcina ukutsha okusebenzayo. Ngethuba le nkqubo, igesi ye-butane itshiswa nge-oxygen emoyeni kwaye inika ukushisa kwigumbi.
Ezi zitovu zinokushenxiswa ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ngokulula xa zifunwa (ukuba nje zicinyiwe). Zikulungele ukufudumeza amagumbi amancinci, njengoko yenza ngokukhawuleza.
Ezi ntlobo zezitovu azaziwa kakhulu, kodwa zisebenza kakuhle kakhulu. Yinkqubo ephathekayo engadingi naluphi na uhlobo lofakelo kunye / okanye ukugcinwa. I-fuel yayo ilulwelo (iparafini) kwaye ukutsha kwayo kuthe cwaka.
Phakathi kweenzuzo zayo kukukhululeka kokuzihambisa ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye kunye nesantya sokufudumeza. Ukongeza, ubushushu obuveliswa yi Izitovu zeparafini ayigxininisi njengesifudumezi sombane, kunokuba isasazeka ngcono kakhulu kwigumbi. Oku kwenza imvakalelo yentuthuzelo inikezela kakhulu.
Abasebenzisi abaninzi bakhetha iparafini okanye izitovu zeparafini ngenxa yexabiso eliphezulu lekhalorikhi kunye nokhuseleko. Ukuba ufuna ukuthenga isitovu separafini, sebenzisa uncedo lwethu.
Jonga izitovu zeparafini
Xa kuthelekiswa nokusetyenziswa kwezinye izitovu, isitovu separafini asisetyenziswa kakhulu.
Las Izitovu zombane Zizixhobo ezisebenzisa umbane ukutshisa ukuxhathisa kunye nokwandisa ubushushu be-ambient. Banikezela ngobona bushushu bucocekileyo kwaye bunyulu, kuba abuvezi naluphi na uhlobo lokukhutshwa. Enye yeengxaki ukunyuka kwetyala lombane.
Ukusetyenziswa kwezitovu zombane phantse kuxhaphake kwaye zikhululekile kakhulu ukuthutha ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye kwaye nokuba uhamba uhambo. Nangona kunjalo, azilunganga ngokonga, kuba zinyusa kakhulu intlawulo yombane ukuba zisetyenziswa rhoqo.
Izitovu zombane zihlala zithengwa kakuhle ukufudumeza amagumbi ngexesha. Amaxabiso aphantsi kwaye aphantsi, ngoko ke alungele ukusetyenziswa ngamaxesha athile.
Jonga izitovu zombane
Zikulungele ukuba ufuna ukugxininisa ubushushu kwigumbi elinye okanye amabini kwaye awudingi ubushushu ukuba busasazeke kuwo onke amagumbi asekhaya.
Iinguqu ezinokuthi zithathelwe ingqalelo xa ukhetha isitofu
Ukukhetha uhlobo oluthile lwesitovu okanye olunye, kubalulekile ukuqwalasela izinto ezininzi:
Eyokuqala kukukwazi kwesitovu ukuvelisa ubushushu ngexabiso elincinci. Ngokubanzi, okukhona isitovu sinamandla, kokukhona sifuna amafutha amaninzi okanye siwusebenzisa ngakumbi umbane (kwimeko yezitovu zombane).
Ukwazi amandla e-calorifi eyaneleyo yesitofu sethu, kufuneka sazi indawo epheleleyo yendlu. Amandla alinganiswa nge-kW. I-kW nganye yamandla iyakwazi ukufudumeza i-8 square metres Ngomphezulu. Ngoko ke, ukuba ikhaya lakho li-80 square metres, amandla angama-10 kW aya kukwanela.
Ukwazi ukuba sesiphi isitovu esilungele imeko yakho, kubaluleke kakhulu ukwazi igumbi apho siza kusetyenziswa kakhulu okanye apho siza kufakelwa khona. Ukuba igumbi eliphambili linama-30 square metres, kufuneka sisebenzise amandla angaphezulu kunoko lingama-20 square metres. Ukwandisa ukusetyenziswa kwesitofu, kuyacetyiswa ukuba usebenzise idatha yereferensi kwi-kW ekhankanywe ngasentla.
Indawo yesitofu yinto emiselayo yokusebenza. Ukuba igumbi apho siza kufaka okanye sibeke kulo lifudumele kakhulu, kuya kufuneka silisebenzise ixesha elincinci. Ngokuchasene noko, ukuba ibanda kakhulu, kufuneka silungise igumbi ukuze sinciphise ukusetyenziswa kwesitovu.
Ukwandisa ngakumbi ukusebenza kakuhle kwesitofu, zama ukukhetha indawo kwindawo yegumbi eline-insulation ekhethekileyo, ukwenzela ukuba ubushushu obuvela kwisitofu bungalahleki kwiindonga okanye kwiifestile. Kubalulekile ukushiya malunga ne-40 cm yesithuba phakathi kodonga kunye nesitovu okanye nayiphi na into enokutsha ukuphepha imililo enokwenzeka.
Kuyimfuneko ngokupheleleyo ukuba igumbi esibeka kulo isitovu libe nenkqubo yokukhupha umoya kunye nokukhupha umsi ukuthintela ubushushu obugqithisileyo okanye nayiphi na ingozi yomlilo.
Iifestile kunye ne-insulation
Ukuba indlu ine-insulation efanelekileyo kunye neefestile eziphindwe kabini, isitofu siya kusebenza ngcono. Ungalibali ukuhamba umsantsa malunga 30-40 cm phakathi kwesitovu nayo nayiphi na into enokutsha.
Indlela yokukhetha isitovu
Nje ukuba zonke izinto eziguquguqukayo zithathelwe ingqalelo zaziwa, sinokukhetha ukuba sesiphi isitovu esisilungeleyo.
Izitovu zokhuni zezona zibonelela ngobushushu bokusebenza okuphezulu kunye nokutsha okucocekileyo. Zingasebenzisa amafutha ahlaziyekayo afana nokuthena iinkuni. Ukongezelela, banento yokuhlobisa idangatye lisinika lona. Iyakwazi ukusinika lo moya wasekhaya siwufunayo. Kukho iimodeli ezininzi zokuziqhelanisa nokuhombisa esikuthanda kakhulu. Phakathi kweenzuzo zayo sifumanisa ukuba kunzima ukufuna nawuphi na umsebenzi. Bafuna kuphela uqhagamshelo ngaphandle kwindawo yokukhupha umsi.
Kwelinye icala, izitovu ezakhiwe ngentsimbi kunye nezinto ezikwaziyo ukuxhathisa zilungiselelwa ukufudumeza iindawo ezinkulu kuneenkuni.
Ukuba ufuna ukushisa okukhawulezayo kodwa okuncinci, khetha isitofu esenziwe ngezinto zetsimbi. Ukuba ufuna ukushisa okunamandla kwaye okuhlala ixesha elide, kodwa kancinci ekuqaleni, Khetha iinkuni, i-biomass okanye izitovu zepellet.
Eyona Brands yesitovu
Kuhlobo ngalunye lweenkuni kukho iibrendi ezibonelela ngokusebenza ngcono kunye nezitofu ezisebenzayo.
Kwizitovu zokhuni sifumana iimpawu eziphambili njengeRocal, iCarbel, iHergom kunye neBronpi.
Izitovu zePellet zineempawu ezaziwayo ezifana nezi ILacunza, i-Ecoforest, iBronpi kunye ne-Edilkamin.
Ngokubhekiselele kwizitovu zerhasi sifumana iimpawu ezinamandla ezinje DeLonghi kunye Orbegozo.
Kwizitovu zeparafini sineempawu ezinomgangatho olungileyo / umlinganiselo wexabiso onjenge Qlima, Webber kunye noKayami.
Izitovu zombane zineentlobo ezininzi zeempawu, kuba zithengiswa kakhulu. Sifumana iibrendi ezilungileyo kakhulu ezifana Orbegozo, Clatronic, Rowenta, Klarstein, Thermic Dinamics, DeLonghi kunye neTaurus.
Ngolu lwazi ungakhetha ukuba sesiphi isitovu esilungele imeko yakho kwaye wonge kangangoko kunokwenzeka ekufudumezeni ngelixa usonwabela zonke izibonelelo.
1 Ezona zitovu zitshiphu kakhulu zokufudumeza indlu yakho ebusika
2 Iindidi zezitovu
2.1 I-air conditioner ephathekayo enempompo yobushushu
2.2 Isifudumezi seCeramic
2.3 Iiradiyetha zokusetyenziswa okuphantsi
2.4 Irediyetha yeoli
2.5 Izitovu zomthi
2.6 Izitovu zeBioethanol
2.7 Izitovu zepellet
2.8 Izitovu zomthi
2.9 Izitovu zegesi
2.10 Isitovu separafini
2.11 Izitovu zombane
3 Iinguqu ezinokuthi zithathelwe ingqalelo xa ukhetha isitofu
3.1 Amandla okufudumeza
3.2 Ubungakanani begumbi
3.4 Ukupholisa umoya
3.5 Iifestile kunye ne-insulation
4 Indlela yokukhetha isitovu
5 Eyona Brands yesitovu
Iparafini kunye nezitovu zeparafini
Izitovu zePellet kunye nebiomass
Iithermostats zeWiFi zeCyber ​​​​ngoMvulo
Izitovu ezitshiphu 2022 - Umgaqo-nkqubo wobumfihlo - Ulwazi malunga neicookies